Top 5 sản phẩm kem nền Clio chất lượng được yêu thích nhất | Muasalebang - Muasalebang
Top 5 sản phẩm kem nền Clio chất lượng được yêu thích nhất | Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 sản phẩm kem nền Clio chất lượng được yêu thích nhất | Muasalebang in Muasalebang
Uma kubhekiselwa emigqeni ukhilimu wesizinda Ngekhwalithi ephezulu yamanje, nenani elikhulu lamakhasimende, i-Clio izoba yigama elingafanele liphuthelwe. Kwaziwa njengomugqa wesisekelo ovela e-Korea, othandwa ngedizayini enhle nekhwalithi evelele yemvelo kanye nekhava. I-Clio uthembisa ukuba yisinqumo esiphelele kwabesifazane abadinga izimonyo zemvelo, ezihlala isikhathi eside usuku lonke.
1 Mayelana nomkhiqizo we-Clio
2 Linganisa okuhle nokubi kwe-Clio. foundation
3 Imikhiqizo engu-5 ephezulu eyintandokazi ye-Clio foundation
3.1 3.1 I-Clio Kill Cover Cover Airwear Protexture Foundation ephezulu
3.2 3.2 Isisekelo Esiyintandokazi Se-Clio Kill Cover Glow
3.3 3.3 Isisekelo Esisha Se-Clio Kill Cover Stamping
3.4 3.4 I-Clio Kill Cover Highest Wear Foundation inokuxhumana okuhle
3.5 3.5 I-Clio Kill Cover Stay Perfect Foundation ukuze uthole amanzi amaningi
Mayelana nomkhiqizo we-Clio
I-Clio cosmetics brand yaziwa njengeyunithi esebenza ngokukhethekile emigqeni yezimonyo yezimonyo evela e-Korea, eyasungulwa ngo-1993. I-Clio igxile ekuhlinzekeni ngemikhiqizo esezingeni eliphezulu, ngaphezu kwalokho imikhiqizo ye-Clio inakekelwa kusukela ezithakweni kuya emaphaketheni nasemalebula.
UClio waqala ngomkhiqizo wokwenza izimonyo okhokhelwayo othi “Clio Professional” ngo-1993. Njengoba inkampani iqhubeka nokukhula, iye yethula ngokuqhubekayo amanye ama-sub-brand: uPeripera wazalwa ngo-2005, uGoodal wazalwa ngo-2011 kanye noHealing ngo-2017. Njengamanje, imikhiqizo kaClio mikhulu kakhulu. ezihlukahlukene, egxile imikhiqizo izimonyo: isisekelo, I-Clio, i-lipstick Clioconcealer… Kumuphi umugqa Isisekelo se-Clio isiba “umkhuba oshisayo” omusha othandwa abantu abasha emhlabeni jikelele.
Linganisa okuhle nokubi kwe-Clio. foundation
Ukwazi Isisekelo se-Clio kuhle njengamahemuhemu noma cha, futhi uthole ulwazi oluwusizo kakhulu. Bafundi, sicela niqhubeke nokuhlola nathi izinzuzo nezibi ezilandelayo ze-Clio foundation.
I-Clio foundation ivela kumkhiqizo waseKorea wegama elifanayo, ikhwalithi iqinisekisiwe kuzo zonke izinyathelo. Ikakhulukazi eqinisekisiwe ngokwezindinganiso eziqinile futhi enconywe ochwepheshe abaningi nama-blogger wobuhle.
Umugqa womkhiqizo unokuthungwa koketshezi olukhanyayo, kulula ukusabalalisa nokungena esikhumbeni, udinga nje ukusebenzisa isandla sakho ukuze usakaze ukhilimu kalula kakhulu.
Izilonda zezinduna, imibuthano emnyama ngaphansi kwamehlo noma izimbotshana ezinkulu zingavaleka zifike ku-80%, zilethe ungqimba lwesikhumba esimhlophe, esipinki, kanye nesikhumba esibushelelezi ngokwemvelo.
I-Clio ihlanganisa izici eziningi ezithuthukile ezifana nalezi: umswakama ophelele, ukuvikela ilanga, ukupholisa, ukucwenga kwesikhumba … ngaleyo ndlela kusiza ukunciphisa inqubo yokwenza izimonyo. Ifaneleka ngokukhethekile kuzo zonke izinhlobo zesikhumba, eziphephile futhi ezingacasuli.
Isisekelo se-Clio sinekhono lokunamathela kumbala kahle kakhulu, silawule uwoyela ngokuphumelelayo, siqinisekise ukuthi awulahlekelwa ithoni eningi noma umbala ofiphele isikhathi eside.
Umugqa womkhiqizo wesisekelo unezithako zemvelo namaminerali anenzuzo, ngakho akesabi ukomisa futhi akubangeli ukucasuka kwesikhumba.
Kwabanye benu abanesikhumba esinamafutha, nizozizwa kakhulu uma nisebenzisa isikhumba esinamafutha ngoba imvelo ye-Clio foundation iwuketshezi, maningi impela ama-moisturizers.
Intengo iphakeme kuneminye imigqa yesisekelo eminingi emakethe.
>>>Funda kabanzi: [Review] Isisekelo seMaybelline Fit Me sihle, kufanelekile ukusithenga?
Imikhiqizo engu-5 ephezulu eyintandokazi ye-Clio foundation
Okwamanje Isisekelo se-Clio yethulwa emakethe ngezinhlobo eziningi ezahlukene. Kodwa okuvelele kakhulu kanye nokuthandwa kakhulu kusamelwe kukhulunywe ngakho Top 5 Clio isisekelo ngemva.
3.1 I-Clio Kill Cover Cover Airwear Protexture Foundation ephezulu
Ulayini weClio Kill Cover Airwear Protexture Foundation uhlukaniswa njengesisekelo esiwuketshezi. Okufana nesisekelo esiwuketshezi namuhla kodwa esinokuqina okuphansi. Isakhiwo Isisekelo saseKorea Kucishe kufane nengqikithi yokunakekelwa kwesikhumba, ngakho-ke uma uyigcoba ebusweni bakho, uzozwa ukuthi isikhumba sithambile futhi sikhululekile, asifihli ngokuphelele njengamanye ama-creams esisekelo. Enye inzuzo yomkhiqizo ukuthi ihlala isikhathi eside, qiniseka okungenani amahora angu-6 ngesisekelo sesikhumba esingashintshiwe.
I-Clio Kill Cover Foundation Lo mkhiqizo uqukethe i-Lifting Serum ukusiza ukuqinisa nokuqinisa isikhumba. Ngesikhathi esifanayo, inikeza amanzi okuqhubekayo ngenxa yama-42% wamafutha abalulekile athambisayo emvelo. Ngesikhumba esine-acne, ukusebenzisa lesi sisekelo kukhululekile kakhulu ngoba akubangeli ukucasuka esikhumbeni, kungakhathaliseki ukuthi isikhumba esibucayi noma izindawo ezilimele. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo futhi unesici esakhelwe ngaphakathi sokuvikela ilanga SPF 25 PA++. Ukusiza abasebenzisi ukuthi baqiniseke ukuthi isikhumba sabo sihlala sivikelekile emiphumeleni eyingozi yelanga. Ikakhulukazi ekugcineni, isikhumba singokwemvelo, somile futhi asimanzi kakhulu, asinamathele lapho sithintwa.
Intengo yesithenjwa: 399,000 VND
3.2 Isisekelo Esiyintandokazi Se-Clio Kill Cover Glow
I-Clio Kill Cover Glow Foundation iyisisekelo sokumboza esiphezulu esinikeza isiphetho esigcwele esikhumbeni. Qinisekisa ukuthi isikhumba sakho siyacwebezela futhi sibushelelezi ngaphansi kwelanga nakuba ihlobo elishisayo liyeza. I-Clio Lokhu kuqukethe i-Hyaluronic Acid ngobukhulu obuhlukahlukene, ngomphumela wokuhlinzeka ngamanzi nokuthambisa isikhumba. Inikeza isikhumba ukukhazimula okuhlala isikhathi eside, ukukhanya nempilo, inciphisa isikhunta sobuso. Uma isetshenziswa, ngeke idale umuzwa wamafutha, kodwa umuzwa wokuthi isikhumba sibonisa ukukhanya, sidale ukukhanya. Igwema umuzwa wokunamathela, ngomphumela wemvelo wokufihla.
Ngenkomba ye-SPF50+ PA++++, i-Clio foundation ingasiza ukuvikela isikhumba ngokuphepha elangeni, kuyilapho isiza isisekelo singacimi. Umkhiqizo futhi uqukethe cishe u-64% we-essence e-moisturizing esikhumbeni, unomsoco futhi unikeza isikhumba ukukhanya okubushelelezi usuku lonke. Kill Cover Foundation ungumnikazi wemibala efika kwemi-5 ukuze wonke umuntu azikhethele ngokwezidingo zakhe. Ngokuphathelene nokuklama, leli bhodlela lesisekelo libukeka lihle kakhulu futhi linethezeka, le nguqulo ekhethekile nayo iza nebhulashi lesisekelo.
Uma uvula isivalo sesisekelo, uzobona ukuthi ngaphakathi kunomklamo wekhanda lesifutho. Ngekhanda lesifutho elinjengaleli, ungathola kalula umkhiqizo ngaphandle kokuba nesimo sokuphatha ngokweqile noma ukuchitheka phezulu kwebhodlela.
>>> Bona okuningi: [Review] Isisekelo Esiphezulu Esiphezulu Esiyi-10 Sesikhumba Esomile Namuhla 2021
3.3 Isisekelo Esisha Se-Clio Kill Cover Stamping
Okokuqala, ake sikhulume ngokufakwa kwe-Clio Kill Cover Stamping Foundation. Ngoba lokhu kuwumkhiqizo oyisisekelo, kepha kuqukethwe kumklamo ocishe ufane neCushion. Mhlawumbe lona umehluko kimina ukuhlukanisa umkhiqizo kwamanye ama-Clio foundation creams. I-Clio Kill Cover Stamping Foundation inoketshezi oluncane oluncane, olulula, kodwa imboza kakhulu, esiza ukukunikeza isisekelo esicacile, esicwebezelayo nesingokwemvelo. I-Clio Kill Cover Ampoule Cushion nayo inenkomba yokuvikela ilanga ephezulu kakhulu, ukuze ivikele isikhumba ngempumelelo ekukhanyeni kwelanga nasekulimaleni kwendawo ezungezile.
Ukhilimu Ingemuva lekhekhe le-Clio bánh Lo mkhiqizo uqukethe izinhlayiya zebhamuza ezincane ezizoqhuma ngokushesha lapho usebenzisa isisekelo esikhumbeni. Ivumela ukukhishwa kwezithako ezimanzisa kanye ne-hydrating esikhumbeni esibushelelezi nesibukeka sisincane. Indlela Ehlala Umswakama Opholile kanye no-52% wezithako zokunakekela isikhumba, isiza ngempumelelo ukugcina isikhumba sigqamile futhi sinempilo ngesikhathi sokuzilungisa. Ikakhulukazi, esikhundleni sokusebenzisa i-Air Puff njengamanye okhilimu abayisisekelo, inkampani ithuthuke ngethuluzi lezimonyo elisha elibizwa nge-Stamping Spong ukusiza ukwandisa ukumbozwa.
Intengo yesithenjwa: 390,000 VND
3.4 I-Clio Kill Cover Highest Wear Foundation inokuxhumana okuhle
Lesi sisekelo se-Clio Kill Cover Highest sinokuthungwa okufana nendawo yesikhumba. Ngakho inokunamathela okuhle kakhulu, ayinamafutha futhi inokufakwa okuphezulu futhi ihlala amahora angama-48. Ilungele zonke izinhlobo zesikhumba futhi ishiya isiphetho se-matte. I-SPF50 sun protection factor isiza ukuvikela isikhumba ngokuphelele ngaphansi kwelanga. Ukwakhiwa komkhiqizo kuyinhlanganisela yezakhi eziningi zokunakekelwa kwesikhumba. Inikeza umswakama, inika isikhumba ukugcwala, ngisho nombala, mncane nokukhanya.
I-Clio Kill Cover Highest inomklamo omncane omuhle kodwa iqukethe izici eziningi ezikhethekile ezinjengokwenza mhlophe, ukuqinisa isikhumba, ukuvikelwa kwe-UV, ukulwa nokushwabana. Umkhiqizo uqukethe i-Ampoule – into evelele ohlwini lwezithako, esebenza ekunikezeni izakhi ezibalulekile esikhumbeni. Isebenza ukugcwalisa izikhala phakathi kwemibimbi nezimbotshana zokuthungwa kwesikhumba esingenamthungo. Ikakhulukazi Isisekelo se-Clio Kill Cover Lokhu kunemibala efinyelela kweyisi-6 ehlelwe ngamaqembu angu-3, ​​ngaphezu kwalokho, iqembu ngalinye linamathoni akhanyayo namaphakathi ongawakhetha ngokwezidingo zakho.
Lesi sisekelo se-Clio siphinde sithuthukiswe nge-hyaluronic acid ethambisa ngokujulile ehlanganiswe ne-collageneer ukuthambisa nokuthambisa isikhumba.
Intengo yesithenjwa: 495,000 VND
>>>Bheka ku: [Review] I-TOP 8 esebenza kakhulu isisekelo se-Innisfree namuhla
3.5 I-Clio Kill Cover Stay Perfect Foundation ukuze uthole amanzi amaningi
Okugqamile kwesisekelo se-Kill Cover Stay Perfect Foundation yikhono layo elihle lokumboza konke ukungapheleli okufana nezinduna, amabala ansundu, ithoni yesikhumba engalingani, njll. Isisekelo se-Clio Ayisindi, inokumboza okuphezulu, isakazeka ngokulinganayo, futhi izacile ngokumangalisayo, inika isikhumba ithoni yemvelo, ekhazimulayo. Ngaphandle kwalokho, uma isetshenziswa esikhumbeni, akukho nhlobo umuzwa wokushuba noma osindayo ebusweni. Ngasikhathi sinye, iphinde inikeze ukuvikelwa kwesikhumba okuphelele emiphumeleni eyingozi yemisebe ye-UV ngenxa yesici esakhelwe ngaphakathi sokuvikela ilanga esifika ku-SPF50+ / PA+++++.
Lo mkhiqizo wesisekelo se-Clio unamandla okugcina isikhumba simanzi, ngisho noma ugqoke izimonyo. Izithako ezitholakala emanzini amaminerali emvelo, ahlanganiswe nama-raspberries, anomphumela wokuzola esikhumbeni esicasuliwe noma esibomvu. Ngaleyo ndlela ishiya isikhumba sisesimweni esisha nesikhazimulayo kuso sonke isikhathi sokuzilungisa. Ukushesha kombala amahora amaningi, kuqinisekisa ukuthi umbala awufiphali ngenxa yobuchwepheshe be-“Airy Skin Fit”. Iyakwazi ukunamathela ebusweni besikhumba ukuze uzizwe sengathi awunazo izimonyo, ngemva kwamahora angu-3 noma ngisho namahora angu-6, isikhumba sisasikhulu njengangaphambili.
Ngenhla ngu Okhilimu abaphezulu abangu-5 be-Clio foundation bathenjwa ngabesifazane kanye nokuthola uthando oluphezulu emakethe. Ngokufaka kahle, ukuhlinzeka ngokwakheka okuphelele, kwemvelo, isisekelo se-Clio siyisinqumo esilungele wena. Ngakho-ke ulindeleni ngaphandle kokulondoloza lesi sihloko futhi ubhekisele kuso lapho udinga ukuthenga isisekelo se-Clio esifanele!
>>>Ref: TOP 6+ Best Waterproof Concealer Foundation
Xem Thêm [Review] Top 4 dòng Bỉm Yubest được ưa chuộng nhất hiện nay | Muasalebang
Top 8 cánh đồng hoa cải vàng lý tưởng để bạn check in luôn và ngay | Muasalebang